DEG DEG: Al Shabaab War Lama Filaan ah Kasoo Saartay Khariirada itoobiya ee laga tiray Soomaaliya - Allbanaadir Media | Allbanaadir Media
DEG DEG: Al Shabaab War Lama Filaan ah Kasoo Saartay Khariirada itoobiya ee laga tiray Soomaaliya
Jun 5, 2019 - Comments off
Kooxda Al-Shabaab ayaa war kasoo saartay khariidaddii ay soo saaraty wasaaradda arrimaha dibedda Itoobiya ee tirtay Soomaaliya islamarkaana ku dartay Itoobiya.
Afhayeenka Al-Shabaab, Sheekh Cali Dheere ayaa cod ay baahisay warbaahinta Al-Shabaab ku sheegay in khariidaddaas ay dowladda Itoobiya ku caddeysatay damaceeda fog ee ay ku dooneyso inay dalka Soomaaliya ku qabsato.
Cali Dheere ayaa sheegay in hoggaanka dalka Itoobiya uu “ku adeeganayo hoggaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo gacan geliyay dhulka Soomaaliyeed.”
“Itoobiya waxay hadda mareysaa inay ka gudubtay hadalladi maldahnaa iyo sarbeebihii ay ku sheegan jirtay dhulka Soomaaliya oo ay maanta si cad qorshaheeda banaanka usoo dhigtay” ayuu yiri Cali Dheere.
Cali Dheera ayaa sheegay inay yaab tahay in madaxda dowladda Soomaaliya aysan weli ka hadlin khariidadda dowladda Itoobiya oo ay ka aamusan yihiin.
Waxa uu intaas ku daray in “amxaarada aysan dooneyn Soomaaliya oo kaliya balse damacooda fog uu yahay inay qabsadaan kacbada, balse ay hortaagan yihiin mujaahidiinta”
Afhayeenka Al-Shabaab ayaa dhinaca kale ka hadlay shirkii London ee shidaalka Soomaaliya, wuxuuna sheegay in shirkaas “lagu boobay laguna iibiyey kheyraadka Soomaaliya iyo in baarlamanka Soomaaliya uu ansixiyey qorshahaasi.”